न्याय खोज्दै नवराज विकसहित अन्य मृतकका परिवार काठमाडौँमा, आन्दोलनको चेतावनी – The Public Today
रामबाबु यादव पुस १८, २०७७ ७:१३ pm
काठमाडौं, पुस १८ गते : रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डमा मारिएका नवराज विकसहित अन्य मृतकका परिवार तथा आफन्तहरुले सरकारसँग निष्पक्ष छानबिनसहित न्यायको माग गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पीडित परिवार र उनका आफन्तहरुले न्याय नपाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् । हत्याकाण्डको नौ महिना बितिसक्दा पनि पिडित परिवारले न्याय नपाएको भन्दै सरकारसँग पुनःनिष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोक चन्द विश्वास विकले उक्त घटना मानवता विरुद्वको अपराध भएको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको संलग्नतामा यो घटना घटेको थियो । कानुन बमोजिम दण्ड दिनुपर्छ ।’ उक्त घटना जातीय विभेदले गर्दा घटेको बताए । घटना चानचुने नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘न्याय कहाँ छ ? के यो देशमा न्याय मरेकै हो त? न्यान सबैलाई एक समान हुनुपर्छ भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रुकुम घटना सभ्यता र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको बताए । उनले भने, ‘मानवतामाथिको कलङ्क थियो । रुकुमको घटनामा न्याय हुनुपर्छ । यो अदण्डित हुन्छ भने विधिको शासन छैन ।’ अपराध नै नगरी जातीय विभेदका कारण बालकहरुको क्रुरतापूर्वक हत्या गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘रुकुम घटनामा न्याय भएन भने विधिको शासन, लोकतन्त्र र अदालत मर्नेछ । दोषी पुर्पक्षका लागि जेल बस्नै पर्छ ।’
नवराज विकका बावु मोहनलाल विकले केटीको आमा लक्ष्मी मल्ल एक लाख धरौटीमा छुटेको र अन्य दोषी पनि सामान्य तरिकाले छुटेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो कस्तो न्याय हो ? सर्वोच्चबाट न्याय पाउने आशा गरेका छौँ ।‘
गोविन्द शाहीकी आमा देवी शाहले राज्यले न्याय नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिन् । उनले भनिन्,‘हामी न्याय पाउन काठमाडौँ आएका हौँ । न्याय नपाए र दोषीलाई कारवाही नभए हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’ प्रहरी प्रशासनको कमजोरीका कारण शव ढिला पाएको उनले बताइन् ।
सञ्जिव विककी आमा सीता विकले कहाँ छ कानुन भन्दै प्रश्न औँल्याइन् । उनले भनिन्,‘हामी बाहुन क्षेत्री वा अन्य जात भएको भए न्याय पाउने थियौँ । तर, दलित भएको कारण न्याय पाएका छैनौँ । हामीले न्याय पाउँदैनौँ त?’